एसियाड फुटबलः आज नेपाल र भियतनामको भिडन्त, खेल कति बेला ? – Everest Dainik – News from Nepal
एसियाड फुटबलः आज नेपाल र भियतनामको भिडन्त, खेल कति बेला ?
काठमाडौं, साउन ३१ । इन्डोनेसियामा भइरहेको १८ औं संस्करणको एसियन गेम्स अन्तर्गत पुरूष फुटबलको दोस्रो खेलमा आज नेपालले भिएतनामसँग खेल्दै छ । खेल विभाहा मुक्ति रंगशालामा नेपाली समय अनुसार साँझ साढे ६ बजे पछि सुरू हुनेछ। पहिलो पटक एसियन गेम्समा खेल्न लागेको नेपालले आज जित निकाल्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रनेछ।
यसअघि पहिलो खेलमा एसियाली पावरहाउस जापानसँग १-० को सम्मानजनक हार ब्यहोरेको नेपाल बिहिबार भिएतनामविरुद्ध उच्च मनोवलका साथ मैदान उत्रने छ। पहिलो खेलमा पराजित भए पनि दोस्रो चरण प्रवेश गर्ने सम्भावना जीवितै राख्न नेपाली युवा टोलीले आज भियतनामलाई हराउनै पर्ने हुन्छ।
यद्यपी बलियो टोली भिएतनामलाई रोक्न नेपाललाई त्यति सहज छैन। आफ्नो पहिलो खेलमा पाकिस्तानमाथि ३-० को सहज जित निकालेको भियतनामले नेपालविरुद्ध जित या बराबरी निकाले पनि एक खेल अगावै एसियाड फुटबलको दोस्रो चरणका पुग्नेछ।
यदि आज नेपालसँग पराजय भए अन्तिम खेलमा जापानसँग जित निकाल्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपालले जितेको खण्डमा अन्तिम खेलमा पाकिस्तानलाई हराए नेपाल दोस्रो चरण प्रवेश गर्नेछ।
आजै समूहको अर्को खेलमा जापान र पाकिस्तान खेल्नेछन्। यदि आज जापान विजयी भएको खण्डमा जापान दोस्रो चरण प्रवेश गर्नेछ भने पाकिस्तान एक खेल अगावै समूह चरणबाट बाहिरिनेछ। पाकिस्तानलाई पनि खेलमा रहिरहन आज जापानलाई हराउनै पर्ने हुन्छ। अन्तिम खेलमा नेपाललाई हराए दोस्रो चरण पुग्नेछ।
ट्याग्स: football, Nepal Vs Vetnam, nepali-team